Kiev - guru Ukraine. Guta guru pane ose muUkraine. Information pamusoro Kiev
Kiev ndomumwe guru mumaguta EuropE. Zviri musingadanwi anonzwa guru kuzvimirira Ukraine, zvayo administrative, zvoupfumi, nesayenzi, tsika uye dzidzo centre. Iri guta yevedza vane vanhu pamusoro 3 miriyoni vanhu riri pamhenderekedzo iri Dnepr River.
Kiev iguta chaizvo zvenhau netsika sezvivako, guta zviitiko zvikuru uye kunoshamisa vanhu. Munhu wose achawana imomo chinhu kunyanya zvinonakidza pachake.
Unyanzvi uye mavakirwo Kiev vanoonekwa pfuma nyika. Vazhinji nomukurumbira Artists, vadetembi nevanyori zvinofungidzirwa rakasiyana nemamwe kunaka guta rino. Chinonyanya mukurumbira varipo vanosanganisira: Cathedral of St. Sophia chete kunoshamisa mosaics uye Pamifananidzo hwakatangira kudzokera remakore rechi11; Kievo-Percherskaya Lavra uine yemamongi akawanda uye machechi; Gate yendarama Kiev, iyo yaishandiswa kare 1037; Ukrainian Baroque Church St. Andrew; zvikuru remakore rechi19 Cathedral of St. Vladimir; uye nezvimwe zvinokwezva zvakawanda. Kiev kazhinji vachinzi “mai maguta ose” kubudikidza vokuRussia uye Ukrainians. Zviri remabhuku maguta muEurope. Munhoroondo muzinda Kiev unogona kunzwa mweya kare kose.
Kiev ari kusiyaniswa upenyu hwayo akapfuma tsika. vanoda Theater vachawana dzemitambo dzakawanda kupa siyana chepanzvimbo zvirongwa. zvesimba Most inoitwa wokuUkraine kana Russian. The ichangobva kunatsiridzwa Kiev Opera House anotura Opera yakanaka chaizvo uyewo rakafara repertoire pakati ballets. Ivan Franko Theater ndiwo muzinda wokuUkraine mutambo, mutambo, uye musicals. A yakawanda kwokuratidzwa siyana yaitwa muguta racho vakawanda mamiziyamu uye unyanzvi namaberere.
Kiev aivawo nesayenzi uye dzidzo muzinda kuzvimirira Ukraine. Various mumayunivhesiti uye zvikoro nesayenzi kusanganisira yakakurumbira Kiev-Mogilyanskaya Academy, inova rokutanga establishments yesayenzi kuEastern Europe, vanowanwa ikoko.
Zvaari ndiro guta rweUkraine, Kiev ari kutungamirira mumaindasitiri uye muzinda wezvokutengeserana munyika. maindasitiri makuru Kiev zvinosanganisira: chikafu kugadzira (kunyanya kugadzira bhiti yomuropa), simbi, zvaAtemisi michini, Machine Ezvemutauro, rinopfungaira unganidza, makemikari, zvokuvakisa, uye Textiles. Kukura wokuUkraine zvoupfumi vakapa zvechivhurumukira kuti mabhizimisi basa muguta. Pane yakawanda hofisi itsva nzvimbo, mabhengi, wezvokutengeserana kuratidzwa nzvimbo uye nezvimwe yezvokutengeserana mabhizimisi dzinowanika muguta mazuva ano.
Tora kufamba mumigwagwa yekare muguta rino yevedza, vanonzwa yakasiyana kunaka kwayo uye nomweya waro kare. Nokuti chokwadi kugara kwako muKiev achava mumwe wako kupfuura asingakanganwiki zvakaitika.
nharaunda: 827 sq km,
nzvimbo: Kievan nharaunda, pamusoro River Dnepr
uwandu hwevanhu: 2,900,000 (2001 ndiro.)
hwaro: 482 A.D.
Climate: wakasvinura Continental. Zvinonzi ainyanya inozivikanwa zhinji kunayisa uye cloudiness muchando uye kuwa. Winters kazhinji refu uye chando. Summers vane pfupi asi inogona tsvarakadenga inopisa.
UTC / GMT Kushaya: UTC / GMT + 2 maawa
Area romutemo: 44
zvinokwezva Major: St. Sophia kuti Cathedral, Uspensky Cathedral, St. Michael wemamonk, Kievo-kiev pecherskaya Lavra, Gate Golden, Andreyevsky Spusk.
maindasitiri Major: simbi, ouinjiniya indasitiri, makemikari, Textiles, chikafu kugadzira, zvokuvakisa, dzemagetsi zvinogadzirwa, mweya, mafuta, marasha uye peat kugadzirwa, kuveza indasitiri.
Last update:19 Kubvumbi 19